Ogaden News Agency (ONA) – Sarkaal ONLF- Soomaaliyeey Walaalayaal nooga hiiliya Itoobiya ama isu kaana daaya! By: Xaaji M/rashiid
Sarkaal ONLF- Soomaaliyeey Walaalayaal nooga hiiliya Itoobiya ama isu kaana daaya! By: Xaaji M/rashiid
Posted by Daljir	/ March 9, 2017
Waxaa Caalamka soo maray duulaan ay qaadeen ree Yurub Qarnigii tagay horaantiisii oo ku wajahnaa wadamada loogu yeedho dunida sadexaad kaasoo lahaa ujeedooyin kala duwan. Waxaa dhacday inay qabsadeen qaaradaha Afrika, Eshia iyo Bariga dhexe, waana iyaga waxa loo yaqaano duninda sadexaad. Arinka qabsiinadu ma ahayn mid sahlan oo waxaa lala galay dagaal adag oo ku salaysnaa isdifaacid. Markii guumaystayaashii cadaa la quusiyay kadib, waxaa meeshaa ka dhashay dawlado ay mid waliba calankeeda ka qaadatay qoladii ay iska eriday!
Waxaa jiray in wadamadaas qaar kamid ah oo sugayay inay calankooda qaataan la hoos geeyay dawlado kale iyadoon dadkii go’aanka lahaa waxba la waydiinin. Goboladaas waxaa kamid noqday mandiqada loo yaaqaano OGADEN oo Maabka aduunka sidaas ugu daabacan. Waxaa la xusuusta inay dadka wadankaas u dhashay kolba soo kicinayeen Mawjado halgan ah oo markuu midu shiiqaba mid kale soo hirayay.
Halgamadaasi waxay gacan saar xooggan la lahaayeen umada soomaaliyeed ee dagan jamhuriyadda iyo dawladihii ka talinayay gaar ahaan dawladii u dambeysay ee uu madaxda ka ahaa Marxuum Maxamed Siyaad Barre. Dagaalkii ugu adkaa ee uu la galay Itoobiya wuxuu ahaa kii la baxay 77kii oo dhulka intiisa badan lagu xoreeyay. Waxaa xusid mudan in dagaalkaas ay ka qayb qaadanaysay jabhadii WSLF. Wadanka soomaaliya iyo Jabhadaas ayay Quwado waawayni ka hiiliyeen iyagoo taageero qaawan siyay Axmaarkii Mangiste iyo Taliskiisii macangagga ahaa!
Dawladii Mangiste iyo dawaldo kale oo is qarinayay ayaa hoosta ka xarriiqay in meesha laga saaro quwada jamhuriyadda soomaaliya, waxaana la isla qaatay in loo gacan haadiyo siyaasi kasta oo ka cadhooda dawlada soomaaliya gaar ahaan ciidamada xoogga Dalka. Waxaa gacanta taliska Adis ababa sidaaa ku galay saraakiil badan oo adeegsaday qabyaalad iyo Tolkayoow itaageera aan xaqiina raadiyee wayna u hirgashay arintaasi!
Dawladii soomaalia waxay saaxada kabaxday 1991 waana lakala dhaqaaqay, waxaana meeshii kasoo baxay Inay siyaasadii itoobiya ku siqday Qabaa’ilka soomaaliyeed dhexdiisa. Waxaa iyana durba meesha soo galay nidaamkii itoobiya oo isbadal ku yimid taasoo lagu micneeyay in loo soo gurmaday oo laga badbaadiyay burburkii ku dhacay dawladii soomaaliya oo kale!
Waxay itoobiya si xoogle ugu dadaashay hurinta cdolaadaha umadda soomaaliyeed dhexdeeda iyo yagleelid maamulo iyada dabadhilif u ah oo ku wada xidhan Adis ababa. Waxaa kale oo Geeska Afrika kusoo kordhay waqtigaas fakar guumaysi,diidnimo ah oo Ururka ONLF ku dhawaaqay taasoo ay itoobiya u qaadatay wax sahlan oon marna iyada dhib ku keeni karin. Waxay is tustay in mar haday awoodii soomaaliya meesha ka baxday inuuna Ururkaasi heli doonin gabaad iyo caawin toona, maamuladaasina usoo garbo duubi doonaan cidkasta oy ubaahato sidaana kusoo afjarto dagaalka!
Lama dafiri karo inay itoobiya gaadhay wax ka mid ah riyadeedii, laakiin kumayna guulaysanin inay soo afjarto kacdoonkii ONLF ee aaminsanaa Gobanimada, waxaase dhab ah in maamuladii dabadhilifka ahaa ee ay soomaaliya ka dhistay u gacan galiyeen dad badan oo isugu jiray xubno iyo taageerayaal halganka kamid ahaa!. Ururwayanaha ONLF ayaa falkaas kaga jawaabay inayna Qorigooda u jeedinin xaga maamuladaas. Bishii tagtay ee Febraayo dhexdeedii waxay saxaafadda soomaaliwayn qaarkeed wareysi ka qaaday Sarkaal kamid ah ONLF, kaasoo lagu magacaabo Maxamed Yaasiin Diirane. Sarkaalka oo ah Xoghayaha Golaha dhexe ee Jabahadda ayaa ku nuuxnuuxsaday inay soomaalidu laba miduun soo galaan isagoo cod dheer ku sheegayna wuxuu yidhi-“Soomaaliyeey Walaalayaal nooga hiiliya Itoobiya ama isu kaana daaya” Runtii waa hadal murti xambaarsan oo Gar iyo Xaq ah isla markaana aan filayo inuu saameyn badan ku reebay soomaalida.
Waxaa isbadal lama filaan ahi ku yimid hogaankii sare ee Dawladda soomaaliya waxaana laga dareemayaa guud ahaan soomaaliya naacaw caafimaad oo ku dhisan wadaniyad iyo is jacayl kadib muddo 26 sano ah. Dhacdadaa kadiska kadib waxaa la sheegayay dad Indhaha Cirka utaagay oo kamid ah wadamada dariska ah.
Gabagabadii hadaan isku soo xaabiyo waxaan odhan karaa is badalka u bilowday soomaaliwayn waxaa qayb ka ah adkeysigii, dulqaadkii iyo ducadii ONLF iyo taageerayaashooda.